Mourinho oo dhisaya Daafaca dambe ee Manchester 30 Milyanna kula soo wareegaya Daafaca… – Gool FM
Mourinho oo dhisaya Daafaca dambe ee Manchester 30 Milyanna kula soo wareegaya Daafaca…
(Manchester), 06 Nof 2016 –Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho uu qorshaynayo in uu adkeeyo daafaca kooxdiisa ee jilicsan, waxaana uu £30 Milyan ku doonayaa Daafaca Southampton ee u dhashay Holland, van Dijk.
Laacibkan oo ka dhex muuqday kooxda Southampton tan iyo markii uu ka soo tegay kooxda Celtic ayaa waxaa sida Wargeyska ‘Sunday People’ uu qoray ay Mourinho iyo La taliyeyaashiisu u arkaan in Dijk uu yahay nin cillad bixin kara daafaca dabacsan ee United.
Manchester ayaa 12 gool laga dhaliyay xilli ciyaareedkan taasoo tilmaan u ah in xagga Daafaca uu qalqal ka jiro.
Dhinaca kale Mourinho ayaa xusay in Difaaca Manchester United uusan u adkayn sidii uu doonayay, waxaana iyadoo uu kooxda United ka dhaawacan yahay Daaficii ay ku xisaabtamayeen ee Eric Bailly kaas oo dhaawac ku maqnaanaya illaa dhammaadka December ay danta ku qasbaysaa Mourinho inuu suuqa kala iibsiga Difaacyo ka raadsado.
Balotelli; "Waa suurtogal in Nice ku guuleysato Horyaalka Faransiiska balse ma sahlana"